Ngakho, namuhla siyazi nawe, lokho tariff "MegaFon" "Inguquko ayikwazanga ukugxila", ukubuyekezwa ngakho, kanye izinzuzo nezingozi ze-NDP. Empeleni, lokhu isilinganiso - ikhambi langempela anti-Inkinga. Kodwa kungani ibizwa kanjalo? Ake sizame ukuqonda lokhu.
Kodwa ngaphambi kokuba lokho kuwufanele inkulumo kancane nawe ngalokho ngesilinganiso "megaphone" "Inguquko ayikwazanga zero." Izibuyekezo ngakho, sihlale sinakho isikhathi sokufunda. Kodwa ukuqonda ukuthi yini esinayo ukubhekana - kungcono kakhulu umbuzo obalulekile. Phela, kungenzeka unquma intshisekelo kulolu hlelo.
Into wukuthi "into" yethu yamanje - wukuthi labo amakhasimende abaye baba iningi imvelo "MegaFon". Phela, isici esiyinhloko tariff kukhona izingcingo khulula ngamaminithi angu-20 ngosuku ukuze isibalo opharetha wakho endaweni yangakini. Njengomthetho, kuba likhanga kakhulu amakhasimende akho. Tariff "MegaFon" - "Inguquko ukugxila" (Rostov esifundeni noma iyiphi enye indawo) - lokhu kuyinto kungaba lula ukuxhumana kwezihlobo nabangane. Ake sizame ukuqonda ukuthi bacabangani ngale imali plan amakhasimende. Phela, nabo basuke ukusiza ukwakha umbono jikelele "into" yethu yamanje.
Mayelana izingcingo ku-Russia
Imali ekhokhelwa "megaphone" "Inguquko ayikwazanga zero" uthola Izibuyekezo omuhle kakhulu. Ayevame uqale nge izinzuzo main of lolu hlelo - izingcingo eRussia futhi ngaphakathi esifundeni ekhaya.
Njengoba iye wathi, uma ushayele ababhalisile "megaphone" esifundeni sakho, lezi izingcingo izobiza $ 0. Okuningi ngokunembile, imizuzu yabo yokuqala 20. Kucatshangwa ngakho konke lokhu, khona-ke kufanele ukhokhe amasenti 60 ngomzuzu. izindleko Hhayi enkulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ubiza ekhaya izinombolo, kanye nezinye opharetha izobiza ruble 1.2.
Uma uxhuma wena ukhetho "Zonke izingcingo", ungakwazi ukujabulela - zonke izingcingo izobiza amasenti angu-60. Njengoba kuphawuliwe abasebenzisi eziningi, kuba sipho nenzuzo kakhulu futhi efanelekayo kulabo bathanda ukuxoxa. Kodwa yini enye uthola tariff "MegaFon" "Inguquko ayikwazanga zero" izimpendulo? Lokhu Kuzoxoxwa.
Elinye iphuzu kunalokho ezithakazelisayo ukuthi asizange kunakwe maqondana izingcingo - kungcono ngaphandle esifundeni sakho. On the "megaphone" eRussia uzochitha ruble 3 ngomzuzu, futhi kuwo wonke amanye ama-opharetha futhi yolayini - ruble 12.5. Yilokho izinkinga.
Tariff "MegaFon" - "Inguquko ukugxila" (Rostov esifundeni noma iyiphi enye indawo) idume hhayi kuphela izingcingo namakholi khulula. Kukhona elinye futhi iphuzu elibaluleke kakhulu, okuyinto, njengoba kwaphawula u-amakhasimende abakwazi kodwa jabulani. Yini ephathelene? Yiqiniso, mayelana imiyalezo. Phela, bayizithunywa yesibili ebaluleke kakhulu lapho ukhetha uhlelo tariff umsebenzisi yesimanje.
Into wukuthi unekhono ukuthumela khulula "sms-ni" kunoma iyiphi inombolo endaweni yangakini. Ukuze wenze lokhu, ukuxhuma ngokwakho "SMS XXS". Esikhathini engekho le ndlela, umlayezo 1 kungadla 60 amasenti 1 RUB. Ukuze uthole ezinye izifunda - ruble 3. Kodwa iyiphi imilayezo ye-MMS izobiza amakhasimende in ruble 7.
Njengoba ababhalisile abaningi lapha zamanani kuhle kungavamile ukuba ingozi. Nokho, lokhu akukhona zonke izikhathi ukugqamisa amakhasimende. Ake sizame ukuthola ukuthi yini enye Ungayenza iphawule.
Imali ekhokhelwa "megaphone" "Inguquko ayikwazanga ukugxila" (eMoscow noma imuphi omunye umuzi) usinika ithuba elikhulu uhlale uxhumene. Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi interlocutor yakho. Phela, leli tariff - kuba into elungile isihambi noma nje fan of inkulumo.
Njengoba ababhalisile abaningi kalula ukukhuluma amazwe aseBaltic, CIS, South Ossetia Abkhazia, Ukraine futhi Georgia. Yebo, ngakho konke lokhu, 1 iminithi ucingo kuyokulahlekisela ruble 35. Akukona njengoba nje kungase kubonakale efika kuqala. Ikakhulukazi uma iqhathaniswa nezinye opharetha. Ngokwesibonelo, ezinye zazo ezidinga ruble 100 ngomzuzu.
Isihlobo eYurophu, futhi, konke ingcono kakhulu kuzwakala. Ngomzuzu, uyokhokha ruble 55 kuphela. Njengoba ubona, futhi, azikho amanani amba eqolo. Abanye o-opharetha ucele ukuphinde Europe ruble 100 kuya ku-150. Esikhathini nezinye izingxenye zomhlaba uyokwenza inkulumo ruble 97. Shiya inzuzo kanye sipho esihle.
Izinga izingcingo emagumbini ezisemajukujukwini, ukuthi amakhasimende ngithi okuhle kakhulu. Ukuhluleka kwenethiwekhi is akubone. Futhi lena iphuzu elibalulekile kucatshangelwe lapho tariff yokuxhuma nokuhlela mpendulwano phesheya. Nokho, sizobe siqhubekele phambili. Kwakukhona elilodwa ngaphezulu iphuzu kunalokho ezibalulekile okufanele zicatshangelwe.
Yini thina sishiye? Yiqiniso, ngesilinganiso "megaphone" "Inguquko ayikwazanga zero" (eKursk, noma yimuphi omunye edolobheni) kufanele kusho ezingasho kufinyeleleke ku-intanethi. Basenza uhlale uxhumekile, kungakhathaliseki indawo. Futhi-ke kubalulekile ukuba siqonde zonke izinto kahle kakhulu kule ndima.
Ngeshwa, akubona bonke amakhasimende happy. Imali ekhokhelwa "megaphone" "Inguquko ayikwazanga zero", impendulo ku-Internet mobile uthola akuyona okungcono. Into wukuthi ukuze uthole ukufinyelela ukhululekile World Wide Web, kuzodingeka ukuthi akhokhele uxhumano inketho eyengeziwe ngokuthi "Inthanethi XS". Kungenjalo-ke kuyadingeka ukuba 1 megabyte idatha ukukhokha ruble 9.9.
Into yokuqala ukuthi ayizithokozisi amakhasimende - kuyinto izindleko traffic. Ungathola okuthile okungcono. Futhi izinga uxhumano Inthanethi akuyona ababhalisile ujabule kakhulu. Ngakho, iphuzu umpofu we plan tariff. Nokho, uma ungeza iphakethe ezengeziwe amasevisi (subscription Imali kuba ruble 200) akunankinga. Nokho, ungakhetha isilinganiso eshibhile uma uhlela ukusebenzisa kuphela kwi-Inthanethi.
Imali ekhokhelwa "megaphone" "Inguquko ayikwazanga zero" (Tyumen noma imuphi omunye umuzi) - lokhu ikhambi langempela anti-Inkinga kulabo uhlela ukuxhumana ngokwenza amakholi wefoni. Ikakhulukazi uma okuyo wonke amasevisi we-opharetha mobile. Yiqiniso, it has nezihibe.
Noma kunjalo tariff "Megfon" "Inguquko ayikwazanga zero" ithola wokubuyekezwa okuvumelekile ezimweni eziningi. Njengoba iye wathi, uma unquma ukusebenzisa le opharetha mobile i-inthanethi, kungcono ukuba ixhunywe noma iphakheji ekhethekile, noma ukhethe noma iyiphi enye uhlelo tariff.
Non-koda ultrasound liposuction